Ity Dollar General Display ity dia miresaka momba ny 'Ghostbusters' - iHorror
Home Cool zavatra hovidiana Ity Dollar General Display ity dia miresaka momba ny 'Ghostbusters'
Ity Dollar General Display ity dia miresaka momba ny 'Ghostbusters'
Mieritreritra fa misy ny mpankafy?
by Trey Hilburn III Oktobra 8, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 8, 2021 5,671 hevitra
Ny Dollar General ao Sandia, Texas dia misy resaka rehetra Ghostbusters. Ny tiako holazaina dia jereo ity fiparitahan'ny GB goodies mahafinaritra ity. Noheveriko fa mampiseho ny fandomako ny fanangonana ahy. Toa mila manangana azy bebe kokoa aho. Ireo olona ao amin'ny Ghostbustersnews.com dia nanao asa mahafinaritra tamin'ny fikarohana ity tanindrazana GB ity.
Mpiandraikitra, Leo Vansco velona ho an'ny Ghostbusters sy ny fampisehoana azy. Ity dia ampahany amin'ny hetsika Trunk na Treat izay mitranga any Sandia, Texas. Ny hetsika dia hidina amin'ny 31 Oktobra, manomboka amin'ny 6:00 hariva-9:00 hariva. Raha eo amin'ilay faritra ianao dia mety hipetraka eo ary hiarahaba anao.
Lehibe io fanangonana io! Ahitana sarivongana alika mpampihorohoro, fonosana proton, fanamiana GB ary maro hafa. Azo raisina tsara hipetraka eo ambony latabatray ity lehilahy ity.
Ghostbusters: Aorian'ny fiainana tsy lavitra izao. Midina amin'ny sinema manomboka amin'ny 19 Novambra.
Ny synopsis ho an'ny Ghostbusters: Aorian'ny fiainana mandeha toy izao:
Rehefa mifindra any amin'ny tanàna vaovao ny reny tokan-tena sy ny zanany roa, dia vetivety dia hitany fa manana fifandraisana amin'ny Ghostbusters tany am-boalohany sy ny lova miafina an'ny raibeny izy ireo.
Ahoana ny hevitrao momba izany Ghostbusters fanangonana? Manana karazana ve ianao? Ghostbusters fanangonana? Aza misalasala mizara sary vitsivitsy amin'ny fanangonana nataonao tao amin'ny pejinay Facebook na Twitter.